Ndinokunyusa njani i-SEO backlinks yam uluhlu kwiimithombo zamagunya?
Uluhlu lwe-backlinks lwe-SEO luyisigxina se-intanethi ye-intanethi. Ewe, i-backlink esemgangathweni inamandla ngokwaneleyo ukuqhuba umkhankaso wakho jikelele kwi-Injini ye-Injini yokuSebenza kwizinga elitsha ngokuqinisekileyo. Ngokuqinisekileyo, isakhiwo soqhagamshelwano lwekhontrakthi siya kuhlala sifuna ukuzinikela okukhulu kunye nokusebenza kanzima-akunakuze kugqitywe ngeentsuku ezimbini. Ukwakha i-organic quality ye-SEO uluhlu oluvela kwimithombo yamagunya yinkqubo eqhubekayo kunye nexesha, kodwa ihlala ihlawula phantsi kwazo zonke iimeko.
Ngaphambi kwayo nayiphi enye into, yonke i-backlink idalwa ngokubanzi xa umthombo othile wangaphandle osebenzayo udibaniswa kumakhasi akho ewebhu. Ngenxa yoko, ama-backlink aqhelekileyo ayaziwa njenge-backlink zangaphandle. Indlela yokuphucula ngayo loo nto nge-backlinks uluhlu lwemgangatho ophezulu wezinto eziphilayo? Kakade, akudingeki ukuba usebenze iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisixhenxe ngeveki ukuze ufumane umphumo wokuqala. Enyanisweni, ukuba ne-SEO ibuyisele kwakhona uluhlu lwaba-20-40 izixhumanisi ezivela kwizixhobo ezifanelekileyo ziyakwanela. Ndiyathetha ukuba nokuba ne-5 backlinks yemvelo evela kwiwebsite echaphazelekayo ene-PA ephakamileyo (ubukhulu bephepha), i-PR (isikhundla sekhasi), kunye ne-DA (igunya lesizinda) kuya kuba bhetele kunokuba umzekelo 50 we-backlink of quality or even. Ngaloo ndlela, ngokuqwalasela ii-backlinks ze-SEO uludwe kwiwebhusayithi yakho, umgangatho ubalulekile.
Asikho isidingo sokuthi ukuzama ukukhohlisa iGoogle ngokubhekiselele kwi-backlink ebonakalayo ye-organic kodwa ihlawulwe ngokukhawuleza iziphumo ezithile ezingathandekiyo.Okokuqala, ekufumaneni nayiphi na into enokukrokra (inkqubela phambili yokwakha ikhonkco ngokukhawuleza, umzekelo) okanye izenzo ezinokukhusela (ezifana nokusebenzisa iifama zonxibelelwano, iivili zokudibanisa iivili, okanye ii-backlink ezihlawulwe zithengiswa ngobuninzi), i-Google iya kufaka isicelo sokufumana isohlwayo sokuqala. Ngokuqhelekileyo iqala ngethuba lwakutshanje lwakhutshwa phantsi, kwaye luyakwazi ukuphela lula kwiwebhusayithi ngokupheliswa ngokupheleleyo kwiziphumo zophando.
Ukuthintela iziphumo ezimbi ukuba zenzeke, makhe ndikubonise ezinye izicwangciso zokuqulunqa ezisetyenziselwa ukudala i-backlink ye-organic quality. Ngokwam, ndandivuyayo ukwakha uluhlu lwama-backlinks e-blog lwe-SEO ngokusebenzisa izi ndlela ezilandelayo: ukuthumela izivakalisi, iingcebiso ezihlakaniphile, ukwabelana ngeposi, kunye nomsebenzi ofanelekileyo kwiifom zewebhu ezinxulumene.Ngezantsi ndiza kuzihlaziya, ngokufutshane.
Ngokwam, ukuthunyelwa kwabapostile ngenye yezindlela ezichanekileyo zokwakha ikhonkco. Yonke into oyifunayo apha ityala ixesha elithile ngokubhala umxholo oyingqayizivele owanika inani kubantu. Ngaloo ndlela, unokufumana kalula i-backlink ezinamandla ezincinane ngokubhala isithuba seendwendwe ezifanelekileyo kwaye ufumane i-backlink ekhomba kwiwebhusayithi yakho ngokubuyisela.
Zama ukuphawula ngokucacileyo okuya kuba luncedo kubantu, ukuze amazwana akho angcono amathuba okuphumelela ngempumelelo ngokumodareyitha nokuvunywa. Khumbula, nangona kunjalo, ukuba iinjongo ezinkulu zophando ezifana neGoogle ngokwazo, i-Yahoo kunye ne-Bing inzondo nayiphi na i-backlinks spammy kunye namazwana. Ngoko, qaphela kwaye ungaqinisekanga ukuba awuzange ungenelele ukuphawula.
Ukwabelana ngokusebenzayo kuyindlela ephezulu yokubuyisela emuva. Yabelana nje ngesithuba sakho kwiziko lezentlalo ezikhokelayo (okanye amaphepha eforum). Ukwenza njalo, awuzukufumana kuphela i-backlinks eyongeziweyo, kodwa uvelise enye ithrafikhi kunye nokuguqulwa-zombini kwiiplani zezentlalo, kunye newebhusayithi yakho eyintloko okanye iblogi kunye Source .